Chọpụta ihe ị ga-ahụ na obodo French nke La Rochelle | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Francia
La Rochelle bụ obodo mara mma nke dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ France na ngalaba nke Charente-Maritime. France juputara na obere obodo na obodo mara mma nke mere anyi choro ihu ya dum. La Rochelle bụ obodo ochie nke amaraworị ịdị adị ya na narị afọ nke XNUMX, mgbe ọ ka bụ obere obodo ịkụ azụ.
Anyị ga-ahụ ihe niile isi ihe na-adọrọ mmasị na obodo La Rochelle, ebe ọ bụ na ọ bụ obodo mara mma nke ukwuu. Ihe dị mma banyere ebe ndị a dị mma bụ na ha enweghị njem nlegharị anya na anyị nwere ike ịnụ jụụ. Na mgbakwunye, enwere ike ịhụ ya na obere oge yabụ ọ dị mma itinye ya n'okporo ụzọ n'akụkụ ụsọ mmiri France.
1 Akụkọ banyere La Rochelle
3 Rolọ La Rochelle
4 Okporo ámá nke La Rochelle
5 Katidral La Rochelle
Akụkọ banyere La Rochelle
Obodo nta a malitere dịka ọdụ ụgbọ mmiri dị mfe na narị afọ nke XNUMX nke nta nke nta ọ na-enweta usoro dị mkpa. N'ihi ọnọdụ ya dị mma, ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri nke malitere ịzụ ngwaahịa dịka mmanya ma ọ bụ nnu na England, ya mere uto ya bịara ngwa ngwa. N'ihi ya, ọ dị mkpa ka e chebe ya ma anyị ka ga-ahụ ọdụ ụgbọ mmiri ochie ahụ mara mma na ọtụtụ ụlọ elu ndị dị n'obodo ahụ taa. Ebe ọ bụ ebe a na-ere ya, ewepụghị ya na mwakpo sitere na mpụga. Obodo a ghọkwara onye Protestant ebe ha nọ na France ha gara n'ihu na Katọlik, ebe ọ bụ na ọ nọghị n'okpuru ọchịchị etiti. Obodo a ghọkwara isi ụzọ azụmahịa na mba Nordic. N'ime ya ị ka nwere ike ịghọta ụdị ejiji bourgeois ụfọdụ. Na 70s ọ bụ obodo French izizi na-aga ụkwụ na ụkwụ.
Otu n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị nke obodo French a bụ nke ọdụ ụgbọ mmiri ochie ahụ echekwara nke ọma, ya na ụlọ elu ya niile na-agbachitere ya. N'ebe ọwụwa anyanwụ ọdụ ụgbọ mmiri dị ezigbo mkpa kemgbe ụwa na mmepe nke obodo na mgbe ebe a ghọrọ isi okwu maka ahia ohu, ihe ha anaghị etu ọnụ mana nke bụ akụkụ nke akụkọ ntolite ha. Taa ọ bụ marina mara mma ma debe nke ọma ebe anyị nwere ike ịse foto mara mma. Na mgbakwunye, na mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri enwere ije ebe enwere ikuku ma nwee ụlọ mmanya iji na-atụrụ ndụ ụbọchị.
Rolọ La Rochelle
N’ebe ọdụ ụgbọ mmiri anyị nwere ụlọ elu atọ nwere akara ngosi na nke kachasị dị mkpa n’obodo ahụ. Torre de San Nicolás sitere na narị afọ nke iri na anọ na Torre de la Cadena bụ ụzọ mbata ọdụ ụgbọ mmiri ochie na-echebe obodo. The na-ejegharị Tower, malite na nke XNUMX na nke XNUMX narị afọ Ọ bụ ụlọ ọkụ kacha ochie na ụsọ oké osimiri Atlantic na ụlọ mkpọrọ Royal Navy. Erslọ elu ndị a oge ochie na ihe owuwu ha bụ akụkụ nke ihe nketa nke obodo ahụ ma ọ bara uru ile ha anya nke ọma ma nwee ọ takingụ na ịse foto. Taa ị nwere ike ịga leta mmadụ atọ site na ịzụta otu tiketi, yabụ ị ga-eji ahụmịhe ahụ mee ihe.
Okporo ámá nke La Rochelle
N’obodo ahụ, e nwere otu ụlọ mgbe ochie na-adọta ndị mmadụ, nke na-agwakwa anyị banyere ndị bourgeoisie na ndị ahịa bi n’ime ya. A na-elekọta ụlọ ụfọdụ nke ọma karịa ndị ọzọ mana ọ bụ obodo nwere ọmarịcha mma. Gbanye La Rochelle pụta ìhè ebe na arches, nke e kere ka ndị ahịa wee ree ahịa ha zere ihu igwe na-adịghị mma. N'ime obodo ahụ mepere emepe, anyị nwekwara ike ịhụ nnukwu ụlọ nke onwe ya nwere okwute dị nro ma ọ bụ ihu osisi, ụlọ Henri nke abụọ n'ụdị Renaissance, ụlọ ezumezu obodo ahụ nwere ihe mkpuchi na façade ma ọ bụ Obí Ikpe Ziri Ezi.
Katidral La Rochelle
Ọ bụ ezie na obodo a bụ onye Protestant, na narị afọ nke iri na asaa, e wuru katidral ya n'ihi na ndị Katọlik nwere mmeri wee kpebie na ọ ga-abụ isi diocese. Ọ bụ ezie na ọdịdị ya adịghị mma ma na-atọtụ ụtọ ma e jiri ya tụnyere katidral ndị ọzọ, nke kacha mma dị n'ime, ka aghara ịhapụ. N'ime anyị, anyị na-ahụ ọmarịcha windo ugegbe tụrụ àgwà na ihe osise mara mma.
Ọ bụrụ na ị na-enwe mmasị na ngwaahịa mpaghara na ịhụ oghere kachasị dị na obodo, ị gaghị echefu ahịa Les Halles site na narị afọ nke XNUMX. Na nke a kpuchie ahịa anyị na-ahụ n'ụtụtụ ụdị ngwaahịa niile nke dị mma, n'etiti nke oporo na-apụta, nke bụ ngwaahịa kpakpando. Enwekwara mmanya na-atọ ụtọ mpaghara. N'iburu mkpa nke gastronomy French, ọ bụ ebe dị mkpa. Na mgbakwunye, n'ụtụtụ Wednesde na Satọde e nwere ahịa na mpaghara ahụ niile na n'èzí enwere ụdị ụlọ ahịa niile, na-eme ka ọ bụrụ ebe dị mma ma na-atọ ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Francia » La Rochelle